Okushiwo amaphupho mayelana nenhlanzi efile: bukela inhlanzi, ibambe, ubone inhlanzi enhlanzi echibini noma e-aquarium.
Incazelo yamaphupho lapho ubona inhlanzi efile noma ebolile.
Konke engikwaziyo ukuthi inhlanzi ekhanda emgodini ithembisa ukushesha okusheshayo emndenini. Futhi lisho ukuthini iphupho elifile? Iningi labantu libona lo mbono ngendlela ehlukile futhi liyibona njengesibonakaliso esibi. Kodwa lokhu akunjalo ngaso sonke isikhathi. Into eyinhloko ukuhumusha kahle izimpawu ezithunyelwe kithi ephusheni.
Iyini iphupho elifile eliphuphayo?
Izincazelo eziningi zephupho ziphatha imibono yombusi ebusuku. Isibonelo, uma uthinta inhlanzi efile, kufanele ulindele izinkinga zempilo. Yiqiniso, ngeke ziholele ekufeni, kodwa zingaphula ngokuphelele indlela esekelwe yokuphila.
Uma le nhlanzi ihlukana eceleni, khona-ke iphupho elinjalo kufanele lihunyushwe kahle. Ngokungazelelwe, isabelomali sakho sizogcwaliswa emithonjeni ongazange ukwazi ngayo. Isibonelo, ungakwazi ukunqoba ilotho noma uthole umklomelo ongalindelekile emsebenzini.
Ukubheka nje izakhamuzi ezifile ezinqolobaneni, nazo, ziphathwa kabi. Ulindele isikhathi sezingxabano ezincane nokuxabana, futhi ngeke kube nzima ukufika kunoma yisiphi isisombululo esakhayo ngaphandle kokuklabalaza nokuhlambalaza. Ukuze uvikele izinzwa zakho nedumela, zama ukuxhumana nabantu abangalungile ngangokunokwenzeka, futhi uma lokhu kungenakwenziwa, gcina imizwelo yakho ngaphansi kokukhiya nokhiye.
Kuncike kakhulu ngobukhulu bezinhlanzi. Izilwane eziningi ezincane ezifile zithi kuyoba lula kakhulu ukuba unqobe ubunzima bokuphila. Kodwa izinhlanzi ezifile kakhulu, ziyoba nzima kuwe ngezikhathi ezizayo.
Iyini inhlanzi ebolile ephuphayo?
Kubuye kwenzeke ukuthi uma ubona izakhamuzi ezifile ezinqolobaneni ephusheni, uzizwa uzizwa iphunga elimnandi elivela kulo, njengokweqiniso. Lapha kufanele uqaphele indawo yenhlanzi neminye imininingwane ephathelene nemininingwane.
Inhlanzi efile futhi ebolile ehamba phansi phansi e-aquarium, ithi, ngokusho kwakho, faka isikhathi sokuphila hlangothi. Yonke imicimbi, kokubili emibi nokuhle, izokudlula futhi ngeke ithinte impilo nganoma iyiphi indlela.
Uma inhlanzi e-aquarium ibhukuda isisu phezu kwamanzi, khona-ke kufanele ubheke izizathu ezicacile zezinkinga zabo zokuphila. Isixazululo sabo sizophinde silale phezulu, silalelisise. Uma unquma ukuthi ungaqhubeka kanjani, khetha okusobala kakhulu, ngoba lokhu kuzoba yisisombululo esihle kakhulu. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuthatha ingxenye esebenzayo ekunqobeni ubunzima, ngoba ngokuhamba kwesikhathi bangabe besaba kakhulu.
Iphupho lentombazane encane labafileyo, futhi ngisho nangenhlanzi ebolile, ithi esikhathini esizayo uzodumazeka kumuntu othandekayo wakhe.
Indoda efana nombono ebusuku ibonisa ukuwohloka kwezindaba zebhizinisi nezomnotho. Insizwa kufanele iqaphe ngokucophelela izenzo zabalandeli bese uzama ukuhambisana nabo.
Uma inhlanzi ebolile iwa yizicucu ngaphambi kwamehlo akho, bese ulungiselela ukuthi maduzane uzothola imali engenayo engalindelekile (isibonelo, thola ifa).
Ukubona ukuthi ubamba kanjani inhlanzi efile kuyisimanga esibi. Izinkinga zempilo ezinzima zilindele wena, futhi uzobe usolwa ngalezi kanye nokulangazelela imikhuba emibi. Kodwa uma izinhlanzi ezibanjwe zinezikali zegolide, zijabule. Esikhathini esizayo esiseduzane uzothola isiphakamiso sebhizinisi esizoshintsha phakade isimo sakho sezimali sibe ngcono.
Kusobala ukuthi nakuba amaphupho mayelana nezinhlanzi ezifile anencazelo engalungile, lokhu akusho ukuthi kufanele uphonsa izandla zakho futhi ngokuzithoba ulinde ukushaywa kwekusasa. Ubonile iphupho elifanayo njengesixwayiso futhi lingavimbela imicimbi engafuneki uma uthatha isinyathelo esifanele.
Ukufa komama: ingabe ukuhumusha kuyingozi njengoba iphupho ngokwayo?
I-Vitamin E yesikhumba sombuso
Izenzo zokuzivocavoca kubantu asebekhulile
Pancakes nge anyanisi e-turmeric nohlaza oluhlaza
I-Thalassotherapy iyindlela yokwelapha umzimba wakho othandekayo
Izakhiwo kanye nokusetshenziswa kwamafutha e-wort St. John's
Masks izinwele nge amavithamini: zokupheka ekhaya esebenza kahle
Isibikezelo sezinkanyezi ngo-2010 ngentombi